Herinandro Iray Mandalo Ao Koety · Global Voices teny Malagasy
Herinandro Iray Mandalo Ao Koety
Voadika ny 26 Aogositra 2017 17:29 GMT
Koetiana roa no nandray anjara tamin'ny Gulfrun, hetsika iray izay natrehan'i Kthekuwaiti, ary nofaritany toy izao:
“Ny GulfRun dia hazakazaka fiarakodia fatao isan-taona izay manomboka aty Koety ary andehanan’ireo fiara mankany Bahrain ka hiverenan'izy ireo aty indray amin'ny faran'ny herinandro (alaivo an-tsaina ny Gumball kely). Natokana ho anà fifaninanana am-pitiavana eo amin'ireo fiara mpandray anjara ny zotram-piara F1.”
Raha nierona tany an'efitra i K the Kuwaiti, nihodinkodina nitsidika ny Tsenan-Joma nentim-paharazana tao Koety, sady naka sary teny an-dàlana kosa ilay namana bilaogera Forzaq8, izay nanana fotoana malalaka be teo an-tànany tamin'ny Zoma.
Toa nanam-potoana kely ihany koa i Bo9ager, ary nanapa-kevitra ny hampiseho ny ampahany amin'ny sandambola nangoniny mba hankafizin’ny rehetra.
“Nanangana pejy iray tao amin'ny flickr aho misy ny vola nangoniko, manana vola taratasy marobe avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao aho. Ho avy manaraka eny ny sandambola Arabo.”
Nandritra izany fotoana izany, nahatsikaritra i Baroque tao amin'ny Bulletin Board fa manana ny ekipanà “cheerleaders” antsika manokana isika ao Koety ary niresaka momba ny tsy fananan'ny olona laharampahamehana.
“Ity no voalaza ho lohan'ny “cheerleaders”: Naymah Ahmad Al Sabah.. ie, toa manana cheerleaders isika, mahatsikaiky mampalahelo”
Asongadin'i Amer ao amin'ny HILALIYA ny lahatsoratra iray mahaliana nosoratan'ny Kuwait Times momba ireo sakana amin’ny fanafarana entana miditra ao Koety raha ampahatsiahivin'i CyberRowdy antsika kosa ny fotoana hanavaozana ny ADSL sy ny fotoana ahazoana tolotra tsara kokoa mahakasika io ao Koety.
Nanana toetra miantra ihany koa i Albandry tamin'ity herinandro ity ary nanao fanentanana an-tserasera niantso ireo mpirotsaka an-tsitrapo ho anà tsena fanaovana asasoa ho tombontsoan’ireo ankizy miaina miaraka amin'ny ôtisma.
“Fantatrao ve ny atao hoe ôtisma ???
Aretina tena goavana izy io ary maro ny olona tsy mahafantatra hoe inona izany. Tsy hiresaka momba azy io aho. Mila mahafantatra aho hoe firy aminareo no mahalala ny momba izany. Manomana hetsika anaovana asasoa ho an'ny ôtisma aho
Alefako ho hitanareo eto ihany ny vaovao momba izany. Mila mpirotsaka an-tsitrapo vitsivitsy aho. Mila mpanohana. Mila olona hanofa latabatra aho amin’ilay tsena fanaovana asasoa hataoko. “
Te handeha hetsika ara-kolontsaina ve ianao? Manana izay tadiavinao i Exzombie:
“Mikarakara hetsika ara-kolontsaina roa ny masoivohon'i Japana aty Koety amin'ity volana ity:
1. Fampirantiana zavakanto “Zavakanton'ny Taranaka Vaovao avy any Japana” …
2. Rindrankira Japoney “Musa Ensamble” “
Izay no izy… aza miala fa ho alefa eto indray ireo vaovaon'i Koety amin’ny herinandro manaraka!